Talata 18 Jiona 2019. – FJKM
Asan’ny Apostoly 19.1-22
1-Ilay Pentekosta fahatelo (and 1-7)
Misy Pentekosta 3 mantsy tantarain’i Lioka ato aminn’y Bokin’ny Asan’ny Apostoly . Ny voalohany dia ilay tao Jerosalema (Asa 2) : azo lazaina ho Pentekostan’ny Jiosy io . Ny faharoa dia ilay tany amin’i Kornelio (Asa 10.44-45) Azo lazaina ho Pentekostan’ny Jentilisa io . Ny fahatelo dia ny Pentekostan’ny mpianatr’i Jaona Mpanao Batisa . Tamin’ireo dia nisy fiteny tsy fantatra hatrany . Tsy izany hatrany anefa no nisy fa na tamin’i Paoly aza fony vao nino dia tsy niteny tsy fantatra akory izy (Asa 9). Ny fanontaniana kosa dia zao : efa noraisinao ve i Jesoa ka nandray ny Fanahy Masina ianao , tonga Zanak’ Andriamanitra ? (Jao 1.12 ;Rom 8.16) .
2-iLay fanasitranana mahatalanjona (and 11-12)
Tena mahagaga ny niseho : aiza ve ka mosaran’i Paoly avy dia ampy nahasolo Mpiandry hahasitrana sy hampivoaka fanahy ratsy ? Saingy tena nisy tokoa izany haneho amitsika fa velona sy tena mahery ny Jesosintsika .
3-Ilay fahafaham-barakan’ny mpisandoka (and13-16)
Ireo 7 lahy zanak’i Skeva dia mba naka tahaka ny nataon’i Paoly , kanjo zava-doza no niseho . Hay fantatry ny fanahy maloto tsara i Jesoa . Isika foana no adala manaiky horebirebeny tsy hahalala Azy . Fantany koa ny tena mpanompon’i Jesoa . koa ireo mba nianatra nandroandroaka azy ireo , nataony nahita faisana : nitanjaka sy voaratra . Tsy izany mandrakariva koa anefa no mety hiseho fa tsarovy izay nolazain’i Jesoa ao amin’ny Mat .22-23. Samia mailo !
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 8